Kedu ihe azụlinks azụmahịa na uru dị aṅaa ha nwere ike iwetara na saịtị gị?
N'ụwa dị ugbu a nke ụwa, azụmahịa azụlinks na-arụ ọrụ dịka ndị na-aga n'ihu. Ha na-eme nkwado mgbasa ozi n'ịntanetị ma na-eme ka ebe nrụọrụ weebụ dị anya na-ahụ maka engines ọchụchọ. Nbudata nyocha ọ bụla nke search engine nwere ike ime n'enweghị njikọ njikọ.
Ka anyị chee na ọ bụ ihe gbasara anyị. Ị na-anọdụ n'oche mmanya wee nụ na onye na-ekwu banyere gị. Ọ bụrụ na ọkà okwu a mara aha ma kọwaa gị n'ìhè dị mma, ọ na-emetụta gị nke ọma ma na-ewetara gị aha na ikike. Ndị mmadụ nụrụ ozi a na-amalite iche echiche banyere gị. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na mmadụ na-ese okwu, ndị mmadụ jụrụ ịkpọtụrụ ya.
N'ahịa dijitalụ, backlinks nke sitere na ebe nrụọrụ weebụ a ma ama na ndi a ma ama bu ndi anakwere dika mma. Site na ijikọta gị, ha na-agwa ndị ọrụ abụọ ma chọpụta bọtịnụ na ha na-asọpụrụ ihe ị na-ekwu ma ọ bụ ime. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ndị a backlinks na-abụ akara site na isi mmalite ndị a tụkwasịrị obi ma bulie aha gị.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle ihe niile banyere backlinks azụ ahịa na ihe mere ha ji baa uru maka njikwa njikwa search engine.
Gịnị bụ backlinks azụmahịa?
Dịka ndụmọdụ sitere n'aka ndị hụrụ n'anya na ndị dị nso na-anọgide na-enwe ụdị mgbasa ozi kachasị elu, mgbasa ozi azụmaahịa dị elu nwere nnukwu uru maka mgbasa ozi achụmnta ego n'ịntanetị.
N'okpuru engines ọchụchọ, backlinks sitere na saịtị ndị ọzọ na-eje ozi dị ka votu ma kọọ banyere ogo nke ebe nrụọrụ weebụ gị.Otú ọ dị, engines ọchụchọ na-eme ka nkwenye dị na SEO na PageRank algorithms.
N'ikpeazụ, ọ bụla njikọ si saịtị ọzọ na saịtị gị weere dị ka backlink azụmahịa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na njikọ ndị a sitere na ebe nrụọrụ weebụ na-adịchaghị mma ma ọ bụ dị ala, ọ nwere ike imetụta ọnọdụ gị na saịtị ma gbataa mgbalị gị nyochacha ihe nchọgharị gị.Ọ bụ ya mere ị ga - eji chọọ ahịa azụmaahịa dị mma.
Olee akụkụ nke Google weghaara?
Na-adịbeghị anya, webmasters na-ekwu okwu banyere ụfọdụ backlinks azụmaahịa. Ha jiri ụzọ dị iche iche mee ka ọnụ ọgụgụ nke njikọ ndị ọzọ dị. Ụfọdụ n'ime ụzọ ndị a bụ spammy na aghụghọ dị ka njikọ njikọ ugbo, netwọk blog nzuzo, spam, na ihe ndị ọzọ.
Otú ọ dị, Google ghọtara na ụfọdụ n'ime backlinks ndị a abụghị ndị bara uru na ndị a pụrụ ịtụkwasị obi. Nke a kpatara ya, ha kpebiri ime mgbanwe ụfọdụ na ogo algọridim ha, na-aghọta àgwà nke njikọ ndị ọzọ kama ịba ụba ha. Mgbe mmezigharị Google Panda ikpeazụ, ọtụtụ weebụsaịtị na-efu ọnọdụ ogo ha.
A nabatara na ebe nrụọrụ weebụ na-achọpụta ọtụtụ akụkụ dị oké mkpa. N'isiokwu a, anyị ga-edepụta mmadụ anọ n'ime ha nke na-ezo aka nyochaa azụmaahịa azụmahịa. Ịkwesịrị ịṅa ntị na ha mgbe ị na achọ ụlọ ọrụ njikọ ọhụrụ ma ọ bụ iji nyochaa njikọ njikọ gị.
Ka anyị tụlee ụfọdụ n'ime ha:
Nkọwa na mmetụta
Akụkụ kachasị njọ maka backlinks bụ aha. Ejikọtara ya na njikọ. Ọ bụ ya mere oge ọbụla mgbe ị na-achọ ebe njikọ ụlọ njikọ ọhụrụ ahụ, jide n'aka na ebe nrụọrụ weebụ ebe ị na-aga itinye njikọ bụ maara nke ọma ma jiri ndị ọrụ mara ya nke ọma dị ka ndị a kwanyere ùgwù na ụwa n'ezie.
ọdịnaya weebụ ga-enwe ihe metụtara azụmahịa gị. SEG algọridim tụlere mkpa maka igbochi ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị mma site n'ịchụpụ ụlọ ọrụ ndị ka mma.
Iji lelee azụ azụ a, ị ga-ele ndị asọmpi gị anya. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ nke a na-etinye n'èzí n'ahịa gị ahịa site na iji njikọ jikọtara ya na isiokwu gị, a na-ewere ya dị ka azụ ahịa azụmaahịa pụrụ iche.
Ọ naghị adịkarị iji tinye akwụkwọ azụ na ibe saịtị ọzọ. Ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-etinyere na ibe a nwere ike ime ka mgbalị SEO gị. Ọ bụ ya mere ọ bụrụ na ọ bụ nanị ndị ọrụ ole na ole ka ịpị njikọta gị, mkpa ya na icheiche ya bụ obi abụọ Source .